Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Sirdoonka Itoobiya oo Laga Ugaadhsanayo Dhulkii Ay Ka Howgalayeen.
Ciidanka Sirdoonka Itoobiya oo Laga Ugaadhsanayo Dhulkii Ay Ka Howgalayeen.
Posted by Dulmane	/ July 9, 2016
Ciidanka sirdoonka ee gumaysiga Itoobiya ayaa lagusoo waramayaa in laga ugaadhsanayo guud ahaan wadanka Itoobiya iyagoo lagu laayay meelo kala gadisan oo wadanka kamid ah.
Xogtan ay heshay Wakaalada Wararka Ogadenia ee ONA ayaa tibaaxaysa in ay ciidamada sirdoonka ee wayaanuhu la’yihiin meel ay kunoolaadaan kadib markay dadka shacabka ah ee Jabhadaha taageersan bartilmaameed sadeen qaar badana kalaayeen.
Ilaha warkan aan kasoo xiganay ayaa sooqoray magacyada qaar katirsanaa ciidanka sirdoonka ee gumaysiga Itoobiya oo lagu khaarajiyay Woqooyiga wadanka sida Gobolka Tigree iyo waliba Gobolka axmaarada. Ilo wareedkan xogtan aan kahelay oo soo xiganaya qaar kamid ah saraakiisha sirdoonka ee wayaanaha ayaa sheegaya in bilihii ugu dambeeyay ay waayeen xubno badan oo katirsanaa laanta sirdoonka ee wadanka halka qaar kalana ay maydkooda banaanada kaheleen.
Saraakiisha ugu dambeeyay ee ciidanka sirdoonka wayaanaha lagaga dilay woqooyiga Itoobiya ayaa magacyadooda lagu sheegay Asmin Halagom, Barkat Dhiras, Sayid Yiman, Yetinayet Laqaw iyo Jambaru Zalaqe. Shantan sargaal ee ka tirsanaa laanta sirdoonka ee wadanka ayaa lagu soo waramayaa in ay dad shacab ah oo diidan dhaqanka xun ee ciidanka sirdoonka ay dileen iyagoo ka abaal marinayaa dhibka joogtada ah ee shacabka lagu hayo.
Sidoo kale shacabka kudhaqan woqooyiga Itoobiya ayaa kala taageersan labada Jabhadood ee kala ah Jabhada Gimbot 7 Arbanyoj oo kadagaalanta Gobolka Axmaarada iyo Jabhada TPDM oo kahowlgasha Gobolka Tigrey
waxayna shacabku sidoo kale Jabhadahaas ugudbiyaan golduleelooyinka ciidamada gumaysiga ee Goboladaas kusugan si ay jabhadu u hesho fursad ay kulayso.
Ma aha markii ugu horaysay ee ciidanka sirdoonka laga dilo qaar kamid ah kuwo ay utaba bareen gumaadka shacabka, bilo kahor umbay ahayd markii 4 kamid ah ciidanka sirdoonka ee wayaanaha lagu dilay gobolka
Gonder ee dhulka Axmaarada, sidoo kale xubno badan oo katirsan ciidanka sirdoonka ayaa lagu dilay Gobolka
Oromada iyo waliba wadanka Ogadenia oo kamid ah meelaha ugu khatarta badan dhulka ay xukuumada TPLF gumaysato.
Sikastaba ha ahaatee kala daadsanaantii iyo kala shakigii laanta sirdoonka ee wayaanaha ayay ugu darmatay
khaarajinta lala beegsanayo ciidanka sirdoonka ee guud ahaan wadanka waxayna xaaladu hada maraysaa rajo beel aad uwayn.